सवै बिकल्पमा छलफल गर्न प्रचण्ड–झलनाथ सहमत | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← गोविन्द मैनालीलाई जेलमुक्त गर्न टोकियो अदालतको आदेश
दुनियालाई देखाएका हलिउड हस्तीहरु (फोटो फिचर सहित) →
सवै बिकल्पमा छलफल गर्न प्रचण्ड–झलनाथ सहमत
Posted on 07/06/2012 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
२५ जेठ, काठमाण्डौ – एकीकृत नेकपामा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल संबिधानसभा पुर्नस्थापना लगायत सवै बिकल्पमा छलफल गर्न सहमत भएका छन् । प्रचण्ड र खनालवीच आज बिहान खनाल निवास डल्लुमा भएको छलफलमा दुवै नेताहरु तत्कालै सवै बिषयमा मुख्य दलहरुवीच छलफल हुनुपर्नेमा एकमत भएको बताइएको छ ।
भेटमा खनालले सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राख्नुभएको थियो । जवाफमा प्रचण्डले अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएसरह नै रहेकाले पहिले अर्को बिकल्प’bout सहमति गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । ‘अहिलै छाडेर कसलाई जिम्मा लगाउने ? पहिले संबिधान लगायतका सवै बिषयमा सहमति जुटाउं अनि प्रधानमन्त्री फेरौंला’ प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै उनका एक सहयोगीले बताए ।
अहिलेको आबश्यकता राष्ट्रिय सहमति भएकाले सडक प्रर्दशन रोक्न प्रचण्डले झलनाथलाई आग्रह गरेपनि खनालले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो । सडक प्रर्दशनले सहमतिलाई बाधा नपुर्‍याउने खनालको जिकिर थियो ।